Ranesa Firiana: “Mila hamaivanina ny paikady amin’ny Fitsarana avo” - ewa.mg
News - Ranesa Firiana: “Mila hamaivanina ny paikady amin’ny Fitsarana avo”
Hatramin’izao, tsy mbola misy tomponandraiki-panjakana ambony tsaraina noho ny fandikan-dalàna nataony. “Mila hamaivanina ny paikady amin’ny Fitsarana avo”, hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana.
“Ny tokony hatao amin’izao, mila hamaivanina ny paikady fampihatra manoloana ny Fitsarana avo. Tsy tokony hatahotra handalo rantsam-pitsarana ny tomponandraiki-panjakana, raha madio tamin’ny asany sy ny fomba fiasany tamin’ny fitantanana ny firenena izy.”
Io no fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana, momba ny fahasarotan’ny fitsarana tomponandraikitra ambony amin’ny Fitsarana avo (HCJ). Raha ny lalàna amin’izao, toy hoe hasarotina ny fanenjehana olona iray eo anivon’ny HCJ mba tsy hahazoana manenjika na manasazy azy noho ny heloka vitany.
Nefa milaza ny lalàmpanorenana fa eo ambany lalàna avokoa ny tsirairay, raha misy fahadisoana ataony. Na mpitondra izy, na olom-pirenena tsotra: tokony hisy sazy mifanaraka amin’izay fahadisoany. Maro ireo tomponandraiki-panjakana teo aloha no fantatra fa nanao hadisoana, nefa lasa tsy azo enjehina na miandry ny fijoroan’ny Antenimierampirenena ny fahazoana manenjika azy ireo.
Misy ny soso-kevitra azo atolotra
Mba hanamora sy hahazoana mitsara ireo tomponandraiki-panjakana teo aloha na amin’izao fotoana izao, misy andininy tokony hohavaozina amin’ny lalàna momba ny HCJ. Tokony hokitihina, ohatra, ny hoe: ny Antenimiera no manao ny fanenjehana. Eo amin’ny fisaraham-pahefana, tsy tokony ho ny mpanao lalàna no manao ny fanenjehana fa ny mpitsara.
Toy izany ny momba ny fanadihadiana: inona ny fepetra hanaovana famotorana, iza no tokony hanenjika amin’izay fotoana izay? Na ny fitoriana koa aza, mila jerena. Tokony hanan-jo hanenjika ireo olona manao fahadisoana ny olom-pirenena.
Nefa na manao fampahafantarana aza ny olom-pirenena: tsy maintsy mandalo any amin’ny rantsa-mangaika samihafa ny fankatoavana izay hoe tokony hoenjehina ny mpitondra teo aloha na ny amin’izao fotoana izao. Nefa lasa tsy azo atao izay, satria tsy mametraka an’izay ny lalàna.
Mila fanatsarana ny lalàna
Tolo-kevitra iray hanatsara ny lalàna momba ny HCJ, raha mbola eo amin’ny fitantanana ilay tomponandraiki-panjakana ambony, mba tsy hanahirana ny fampandehanan-draharaham-panjakana: azo ekena ny hoe ny HCJ no manenjika sy mitsara azy. Raha tsy eo amin’ny andraikiny intsony izy fa nahavita ny asany amin’ny maha minisitra, na praiminisitra, na filohan’ny Repoblika, filohan’andrimpanjakana: tokony hiverina avy hatrany any amin’ny fitsarana tsotra ny fanadihadiana sy ny fanenjehana rehetra momba azy.
Amin’izao fotoana izao, misy tomponandraiki-panjakana teo aloha tafiditra tao anatin’ny raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana: voaenjika ny olona nampiasaina, fa izy tsy voaenjika. Misy mizana tsindrin’ila izany. Mety misy fanatsarana azo atao mety ho tsotsotra ny lalàna momba ny HCJ, nefa mametraka ny tsirairay ho eo ambany lalàna.
L’article Ranesa Firiana: “Mila hamaivanina ny paikady amin’ny Fitsarana avo” a été récupéré chez Newsmada.
Misokatra ny taom-piotazana lavanila any amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany (V7V). Tsara ny vokatra amin’ity taona ity, tombanana ho 100 t ny lavanila manta. Tsara ihany koa ny vidiny, iray hetsy ariary ny kilao amin’ny lavanila manta, mora indrindra. Tsy vitsy ihany koa ireo orinasa tonga any an-toerana manangona izany vokatra izany. Ny hita ao Manakara, ny Ramanandraibe Export, ny Cotona, ny Sahanala, samy orinasa lehibe avokoa; ahitana ihany koa ireo mpandraharaha avy any avaratra tonga manangona izany vokatra izany.Misy amin’ireo orinasa sy ny mpandraharaha ny mikarakara ny vokatra any an-toerana ihany, anisan’izany ny Ramanandraibe Export, mividy be indrindra. Raha 20 t ny vinan’ny orinasa hovidina amin’izao taom-piotazana izao, efa tafakatra 30 t izany ankehitriny. Tamin’ny taon-dasa, tsy nisy afa-tsy 3 t ihany ny azon’ny orinasa Ramanandraibe Export. Na izany aza, nilaza ny mpamokatra fa mbola tsy ampy ny mpividy.Tsara vidy kokoa ny any SavaMisokatra, toy izany koa, ny taom-piotazana any amin’ny faritra Sava ka any amin’ny kaominina Tanambao Daoda, distrikan’i Sambava, ny nanokafana izany. Tsara ny vokatra any amin’io kaominina io ka izay ny antony nanomezana toerana azy ho fantatry ny mpandraharaha. Nitombo ny vokatra, noho ny fitombon’ny tany novolena sy ny fanarahana ny lamina napetraka hahatsara kalitao ny lavanila any amin’iny faritra iny. Tsara vidy kokoa ny lavanila manta any Sava, tafakatra hatrany amin’ny telo hetsy na dimy alina sy roa hetsy ariary ny kilao.Amin’izao fisokafan’ny taom-piotazana izao, mitaky fananana karatra ho an’ireo mpandraharaha te hiditra amin’izany lalam-pihariana izany ny minisiteran’ny Varotra. Ho matihanina eo amin’ny asa, indrindra ho fisorahana ny asa an-jorony (informel) hiditra amin’ny ara-dalàna. R.MathieuL’article V7V sy Sava: tsara ny vokatra sy ny vidin’ny lavanila a été récupéré chez Newsmada.
Klioban’ny EST: nirarakompana ny fandresena azo
Hafaliana ny nandrenesan’ny filohan’ny klioban’ny EST (Espoirs Sportifs de Tuléar), ny fandresena azon’ny ekipany, nandritra ny fifaninanam-pirenena handball, basikety ary atletisma, izay samy tontosa ny faran’ny herinandro teo avokoa. Nirarakompana tokoa ny fandresena ho an’ity klioba ity satria nahazo ny tompondaka nasionaly, teo amin’ny sokajy “vétéran”, ho an’ny taranja basikety. Raha hiverenana ny voka-dalao, nivoaka mpandresy nanoloana ny Viga Vakinankaratra ny Bcest Toliara, tamin’ny isa 70 no ho 54. Mbola nisalotra ny anaram-boninahitra ihany koa ny Hcest Toliara, nandritra ny fifaninanam-pirenena, sokajy “minimes” ary tompondaka lefitra teo amin’ny sokajy cadets. Tsy ambakan’izany ny teo amin’ny taranja atletisma, izay nahazoan’ny atletan’ny Aest, medaly miisa 6 nandritra ny fiadiana ny tompondaka nasionaly “Jeunes”, ny 27 hatramin’ny 29 aogositra lasa teo.“Nampitony ny alahelo tamin’ny fanenjehana ny mpilalao U14 sy U16 ka tsy nahafahan’izy ireo nanohy hatramin’ny farany ny lalao, izao fandresena mirarakompana izao”, io ny voalohan-tenin’ny filohan’ny EST, i Vital Serge. Sambany, hoy izy, ny fahazoana anaram-boninahitra roa sosona tao anatin’ny 24 ora ka vao mainka mampirisika azy hanohana hatrany ny ekipa. Mi.RazL’article Klioban’ny EST: nirarakompana ny fandresena azo a été récupéré chez Newsmada.
Les hauts responsables du MEF ayant fait leur déclaration de patrimoine La déclaration de patrimoine fait partie intégrante de la bonne gouvernance. L’obligation de déclarer le patrimoine est même devenue une nécessité puisqu’elle est prévue par le décret portant le numéro 2004-983 du 12 octobre 2004. C’est justement en conformité de ces dispositions réglementaires que vendredi dernier, les membres du staff du ministère de l’Economie et des Finances (MEF), conduits par la Secrétaire Générale, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison , ont effectué leurs déclarations de patrimoine auprès du siège du Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) à Ambohibao. Une occasion pour les hauts responsables de ce département de démontrer leur attachement à la lutte contre la corruption. « Nous sommes ici présents afin d’honorer notre obligation pour la déclaration de nos patrimoines respectifs tel que l’exige le décret n°2004-983 du 12 octobre 2004 », a déclaré la SG du MEF. Pour ce ministère, cette initiative constitue un véritable élément de la transparence dans l’exercice des fonctions des hauts responsables, tout en garantissant leur intégrité. L’initiative a été, en tout cas, saluée par Laza Eric Donat Andrianirina, le Directeur Général du Bianco, qui, en s’adressant à la délégation, n’a pas manqué de souligner que « la déclaration de patrimoine est importante dans la mesure où elle figure parmi les mesures mises en place pour mener la lutte contre la corruption ». Le patron de la lutte contre la corruption a ajouté qu’il s’agit d’une « mesure préventive dans le cadre de cette lutte et elle n’est nullement utilisée à des fins d’investigation. C’est une transparence pour les biens des personnes concernées ». Cette initiative du ministère de l’Economie et des Finances est un exemple à suivre pour les autres départements ministériels. R.Edmond. L’article Ministère de l’Economie et des Finances : Déclaration de patrimoine pour les hauts responsables est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Ministère de l’Economie et des Finances : Déclaration de patrimoine pour les hauts responsables a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Nanjary resaka tato ho ato ny amin’ny maha zava-dehibe ny fifandimbiasan-pahefana mazava, milamina, ara-dalàna. Tsy inona fa amin’ny fomba demokratika amin’ny alalan’ny fifidianana. Misy tsinona ny tsy mahandry tantana? Sanatria, alaim-panahy hanao amboletra, na hanakorontana, na hamaly faty… Tsy vitan’izay, miara-dalana amin’izay hoe fifandimbiasam-pahefana izay koa ny fahamarinan-toerana hahazoana miasa. Amin’ny fomba ahoana?Tsy ny asa atao sy izay vita ve no antoka amin’ny famitana hatramin’ny farany ny fe-potoam-piasana amin’izay fahefana nampindramin’ny vahoaka… nifidy? Ny asa atao araka ny fanamby sy izay nampanantenaina; indrindra, araka ny hetahetam-bahoaka mifanitsy amin’ny zava-mitranga sy izay iainana eny am-pandehanana. Saika firesaka mandrakariva ihany koa ny hoe natao hitsinjo mialoha izay mety hitranga ny mpitondra. Hanao ahoana àry izao taona vaovao izao?Ankoatra ny tetikasa goavana hoe hatao na efa an-dalam-panatanterahana, mbola tsy mahafa-bela, ohatra, ny tsy fandriampahalemana; eny, na efa misy fihenana aza: efa tsy firy, ohatra, ny fakana ankeriny. Mampikaikaika ny maro amin’izao koa ny amin’ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fahasahiranana amin’ny tsy fahampian’ny rano na ny orana, ny fahapotehan’ny tontolo iainana sy ny famokarana noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna harena an-kibon’ny tany, ny ady tany…Misy ny azo tsinjovina mialoha amin’izany rehetra izany? Fisorohana izay mety ho fahavoazana, famahana olana izay mety ho fahasahiranana… Handairan’izay mety ho fanelingelenana na fanakorontanana etsy sy eroa ve ny vahoaka, rehefa hitany sy tsapany ary iainany fa tena miasa ho azy izay nampindraminy fahefana ho amin’ny asa fampandrosoana sy fanatsarana ny fiainany andavanandro? Na tena mipaka any ifotony izay lazaina sy atao mahamarin-toetra…Fahamarinan-toetra tsy miovaova amin’izay tsara sy vita efa natomboka, fanitsiana na fanalana izay mety tsy ahombiazana, ohatra. Fahamarinan-toetra… hahamarin-toerana na amin’izay miasa izany, na ny fomba fiasa, na ny asa atao.Rafaly Nd. L’article Marin-toetra… marin-toerana a été récupéré chez Newsmada.
CC Esca: kanto ny seho natolotry ry Erick Manana, Feo gasy, Dama, Benny sy Bebey
Hetsika lehibe, nanamarika iny faran’ny herinandro iny, ny notanterahina tetsy amin’ny CC Esca Antanimena, ny asabotsy sy alahady tolakandro teo. Voaporofo fa manana ny toerany eo amin’ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny tarika Feo gasy sy ny gadona gasigasy.Taona maro ny tsy nahitana an-tsehatra izany tarika Feo gasy izany. Mpiaraka matetika, saingy tsy tazana firy tao anatin’ny taona vitsivitsy koa i Erick Manana sy i Dama. Toy izany koa i Erick Manana sy ry Benny sy Bebey. Iraisan’ireo mpanakanto rehetra ireo ny filalaovana gitara sy ny gadona gasigasy mifangaro fironana hafa, toy ny “blues”.Tsy vitsy ny nankafy ny mozikan’izy ireo ary niandry fatratra ny fiverenan’izy ireo an-tsehatra indray. Seho roa be izao àry ny natolotra tamin’iny faran’ny herinandro iny. Seho samy nanome fahafaham-po ny mpijery, na tsy afaka nandray anjara tamin’ireo aza i Fafah, anisan’ny mpikambana ao amin’ny Feo gasy.Tsotra kanefa mifanaraka tsara amin’ny toe-panahy tony sy feno fitiavana, entin’ny mozikan’ireo mpanakanto ireo, ny sehatra niakaran-dry Erick Manana. Nibahan-toerana ny feon-gitara akostika, narahin’ny korintsana sy ny amponga moramora. Nampivaivay ny fientanam-po, tamin’ireo hira somary mihetsiketsika, kosa ny jiro maroloko.Feno tanteraka ny fampisehoana, hany ka nalain-kisaraka ny roa tonta: i Erick Manana, i Dama, ry Benny sy Bebey ary ny tarika Feo gasy, andaniny, ny mpijery kosa, ankilany. Na samy efa ampolon-taona maromaro aza ireo tarika ireo, mbola tsy afaka am-bavan’ny maro ny hirany ary niaraha-niredona ny ankamaroan’ireo nentina an-tsehatra, nandritra ireo andro roa ireo.Nizara efatra ny fampisehoana tsirairay ka nanokatra ny sehatra i Erick Manana, izay hita ho niaina tanteraka ny kanto natosany ho an’ny mpijery. Nisongadina tamin’ny fampiaraham-peony tamin’i Dama kosa ny feo samy miavaka kanefa mifameno ananan’izy ireo, nampian’ny fahaiza-mitendry gitara, izay mbola mampitolagaga ny maro.Tsy latsa-danja amin’izany ny fiakaran-dry Benny sy Bebey an-tsehatra, izay efa mpiaraka matetika tamin’i Erick Manana, mahay mampitovy tadin-dokanga tsara. Toy ny nitondra tsiahy maro kosa ny fiverenan’ny tarika Feo gasy an-tsehatra, nampiverina indray teo am-bavan’ny mpijery ireo hira mbola mampalaza azy ireo, toy ny “Voahangy”, “Any indray andro…”, sns.Landy R. L’article CC Esca: kanto ny seho natolotry ry Erick Manana, Feo gasy, Dama, Benny sy Bebey a été récupéré chez Newsmada.